Muuqaalka 'Nigthscape' wuxuu u yimaadaa kamarad sawir qaade ah oo loo yaqaan 'Realme 5 Pro' ee Yurub | Androidsis
Telefoonada casriga ah sida Realme XT hore u heshay kuwii caanka ahaa ee u oomanaa Muuqaalka kamaradda Nigthscape ee shirkadda. Waxay ballan-qaadaysaa inay hagaajiso tayada sawirrada si aad ah xaaladaha iftiinka yar, iyadoo la kordhinayo dhalaalka iyo fiiqnaanta sawirrada iyadoo aan la abuurin qaddar buuq leh; natiijooyinka lagu soo helay muuqaalkan runtii way fiican yihiin.
Terminal aan wali helin Habka 'Nigthscape' ee kamaradda sawir-qaadaha (selfie camera) waa Realme 5 Pro (Horeba wuxuu ugu haystay kamaradiisa weyn), mid ka mid ah xarumaha ugu dambeeyay ee bartamaha kala duwan ee shirkadda wuxuuna yimid bishii Ogosto iyadoo Snapdragon 712. Si kastaba ha noqotee, si loo joojiyo codsiyada isticmaaleyaal badan oo qaabkan u wata qaab wanaagsan, shirkaddu waxay billowday cusbooneysiinta ku dareysa shaqadan Yurub, ka dib markii horey loogu sii diyaariyay Hindiya usbuucii hore.
Realme 5 Pro wuxuu helayaa cusbooneysiin kamarad ku saleysan. Nambarkiisa nooca waa "RMX1971EX_11_A.13". Kaamirada gadaal waa inay sidoo kale sifiican ugu shaqeysaa mugdiga mahadnaqa qaar ka mid ah goobaha dheeraadka ah ee lagu soo kordhiyay qalabka cusub. Caddaynta muuqaalka guud ahaan waa in la hagaajiyaa, oo haddii aad la kulantay midab casaan leh qaar ka mid ah sawirradaada, waa in hadda sidoo kale la hagaajiyaa. Cusboonaysiinta ayaa sidoo kale yareyneysa isticmaalka awoodda inta aad daawaneyso fiidiyoow ama ciyaar ciyaar, waxaa mudan in la sheego.
Cusboonaysiintaan ayaa u guuri doonta Realme 5 Pro-gaaga Nofeembar 2019 balastar amniga. Software-ka wali wuxuu ku saleysan yahay Color OS 6.0. Si kastaba ha noqotee, qorshuhu waa inuu ka boodo nooca 6.1 oo uu si toos ah ugu boodo 7.0.
Waa inaad heshaa ogeysiis OTA dhaqso ah, haddii uusan weli ku soo gaadhin. Haddii aadan sugi karin, waad ka gudbi kartaa xidhiidhkan, taas oo ah halka aad ka heli doontid buug soo dejin iyo tilmaamo ku saabsan sida loo rakibo cusbooneysiinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Muuqaalka 'Nigthscape' wuxuu u yimaadaa kamaradda sawir-qaadista ee 'Realme 5 Pro' ee Yurub